‪#‎Oromoo_Protests‬ Iyyaa Iyyaa Iyya dabarsaa Oromia Shall be Free |
‪#‎Oromoo_Protests‬ Iyyaa Iyyaa Iyya dabarsaa
bilisummaa December 18, 2015	Comments Off on ‪#‎Oromoo_Protests‬ Iyyaa Iyyaa Iyya dabarsaa
>>> Ilmaan Oromoo kan hoomaa waraanaa biyyattii keessa jirtanis ta’ee kanneen dhimma nageenyaa eegsisuuf biyya keessa facaatanii arkamtan hundi keessan :
Yaa lammiiwwan koo kunoo yeroon keessani
Beelaa dheebuu keessan fi aduu gammoojjii diilallaa lafa baddaa osoo hin dadhabin Mootummaa Abbaa Irree waggaa 25f Tajaajilaa akka turtan Isin hundi ni beektu .
Garuu har’a yeroo Harmeen tee teessee dhiiga boottu maalumatu hafe jettu ???!!!
Yaa Saba koo rakkoo fi dhiibbaa isin irra jirus beekuu hin dhabne Haata’u malee namni bishaan nyaate hoomacha qabata akkuma Oromoon jedhu san taanee Isinitti iyyachuuf dirqamnee jirra .
Yaa lammiiwwan koo waa nuuf godhuu yoo dadhabdanis :
Nu hin fixinaa
Nutti hin roorrisinaa
Diina waliin lafa keenya irraa nu hin buqqisinaa
Hadaraa Maaloo jireenya dhumattuu
tanaaf jettanii hawaasa keessan irra alagaa hin filatinaa
Dandeessan Nu dhaqqabaa
Harmee Ilmoo ishee dhabdee boochaa jirtuuf Birmadhaa
Yoonin Nageenya saba keessanii eeguu dadhabdanis rasaasa keessan nurraa ol qabadhaa
Haati teessan ni bootti Abbaan keessan ni booha
Jireenyi kana boodaa kami mee yaa Ilmaan Oromoo ???
Mootummaan biyyattii kan kaleessa gootummaa keessaniin biyyattii handhuurfate har’a Aanjeffannaan Ilmaan keessan
Abboota keessan fi
Obbolaa keessan ibidda itti qabee lafa irraa duguugaa jira .
Garuu kana booda carraan keessanis kanuma akka ta’uuf taa’u beekudha qabdu .
Ofiifis Wal hin gurgurinaa
Diinaafis wal hin laatinaa
Afaan tokko ta’aa
Seenaa dabres yaa dadhaa
Yaa Ilmaan Oromoo Ilmaan minilik kan har’a isin ergataa jiran kunis kanuma kaleessa Abboota keessan gabroomfachuu bira taranii duguuggaa sanyii irratti raawwachaa turan akka ta’anis hin irraanfatinaa .
Dhuma dhaamsa kootii irratti Nuti lakkoofsaan million 45-50 yoo taanu gareen nu hiraarsaa jiru kun million 3-5 kan hin caallee akka ta’es yaadachuudha qabdu .
Qabsaawan ni kufa Qabsoon itti fufa
Hirmaattota FDG hundaaf
Akkuma yaadatamu yeroo dabre keessa dhiibbaa fi dararrii humnoota tika Aangoo Mootummaa biyyattiitiin nurratti qaqqabaa jiru ifirraa qolachuuf Molotov fayyadamuun akka barbaachisaa ta’e Isiniif tuqee ture .
Kanuma irraa ka’uun yeroo barbaachisetti du’uun yoo hafa hin qabu ta’e Molotov fayyadamuun baayyee barbaachisaadha
Jalqaba irratti Molotoviin maali kan jedhuuf :
“Molotoviin” jecha Afaan Arabaatiin (الزجاجة الحارقة ) ykn (Molotov Cocktail) ykn Burcuqqoo gubduu jechuudha
Maalirraa qophaa’a kan jedhuuf :
1ffaa Burcuqqoo laslaassaa ykn k.k.f
2ffaa Beenziina konkolaataa
5ffaa Zeeytii Motora sochoosu
Kanneen sadeen gara dhumaatti arkaman kunniin ibiddi ittiin darbatamuuf taa’u kuni wanta itti qabate sanatti akka maxxanuuf gargaara .
6ffaa Xaaqaa xinnoo seenti meetira 4-5 dheeratu if biraa qabaachunis dirqama .
7ffaa Wanti adiin Radio yeroo haaraa bitan ittiin ashagamu kan akka konpor saatoo sunis yoonin jiraate xinnoo isii itti eda’uun baayyee gaariidha jedhee yaada .
Akkamitti hojjatama kan jedhuuf :
1ffaa Burcuqqoo erga qopheeffannee booda Beenziina ykn Gaaza konkolaataa hamma walakkatti itti naquudha qabna .
2ffaa Zeeyta konkolaataa akkasuma Sukkaaraa fi Moora baqaa erga walitti makneen booda Burcuqqoo walakkaan ishee Beenziina qabdu sanatti ol guutudha qabda .
3ffaa Burcuqqoo Beenziinaa fi makaa adda addaatiin ol guutame sana qadaada jabaa hafuuraa fi yaa’a gaazicha gara alatti hin baafneen ukkaamsuun baayyee barbaachisaadha .
Asirratti yeroo qadaadaan burcuqqoo sana cufne waan akka ham’ee fi k.k.fakkaatuun yoo haguugne baayyee barbaachisaadha .
4ffaa Qaccee ykn dhuma Xaaqaa xinnaa armaan olitti dubbatamee sana morma burcuqqoo irratti jebeessinee akka irraa hin baanetti hidhuudha qabna .
Hubadhaa : Xaaqaa kana irraa kan achi dheeratee hafu seenti meetira 4 gadi ta’uu hin qabu .
Yeroo kana hunda xumurre “Molotov” wayyaanee fi konkolaataa isii lafaa irraa gubee barbadeessu qopheeffanne jechuudha .
Akkamitti itti fayyadamna kan jedhuufis :
1ffaa Ati hafuura Beenziinaa ykn Gaazaa kanaa irraa qulqulluu ta’uu kee mirkaneeffachuun dirqama
2ffaa Eega qulqullummaa kee mirkaneeffatteen booda Xaaqaa xinnaa Afaan burcuqqoo irratti hidhamee ture sana Beenziinaan jiisuudha qabna
3ffaa Yeroo darbachuuf qophii ta’uu kee hubatte Kibriitaa fi wanta akka Laaytariitti fayyadamuun qaccee xaaqaa burcuqqoo irraa achi bahee jiru sana irratti ibidda qabsiifta .
4ffaa Walakkaan xaaqicha sanaa gubachuu yoo mirkaneeffatte saffisaan konkolaataa fi Taankii akkasuma waan jajjaboo Isaan bira jiru kan burcuqqoo sana ni cabsa jettee yaaddu irratti darbatta .
Hubadhaa : Yoo fuula diinaa irratti darbuu hedde akka ifaajeen kee kuni si jalaa hin fashalleef lafa jajjaboo ykn waan akka dhagaa kan isaan itti dhihaatan irratti darbachuun murteessaadha .
>> Burcuqqoon Ati konkolaataa fi Taankii ykn lafa jajjaboo fi dhagaa irratti darbite kuni bu’aa Ati barbaadde fiduuf caphuunis dirqama
Yaa Ilmaan Oromoo diinni keenya kan Nu tuffatee dullaa fi waan isaaf mijjaa’e hundatti fayyadamuun nu weeraraa jiru harka duwwaa ta’uu keenya waan hubateef qofa .
Kunoo yaa Saba koo guyyaa hunda booyicha qofaan galuu osoo hin taane diina kee Beenzinaan gubii barbadeessii lafa Oromoo irraa fageessi .
Injifannoon yoomuu Ummata oromoti
Previous Sochiin Dargaggonnta Oromoo hoogganoota fii hayyoota oromotiifi qormaata seenaan itti nama gaafatu ta’ee jira.
Next Ethiopia security forces kill up to 50 people in crackdown on peaceful protests